Ungayabela Kanjani i-RAM Engaphezulu ku-Minecraft? - Ukudlala
Ingabe ikhona indlela yokwandisa ukusebenza komdlalo wakho we-Minecraft? Ubuwazi ukuthi iMinecraft ayinciki kwi-RAM ephezulu yohlelo lwakho? Kukhona inani elithile iMinecraft elidlayo futhi akukho okunye okudlula lokho. Lawa mavelu asethwe ngokwenguqulo nangemodi ye-Minecraft onayo. Noma kunjalo, ungawashintsha la manani.
Ngokulungiswa, ungabela i-RAM eningi iMinecraft ukuthola ulwazi lokudlala olungami. Lapha uzofunda ngezindlela ezahlukahlukene zokuthwala inqubo. Ngaphambi kokuthi ungene kukho, ake sifunde isizathu sokusebenzisa i-RAM eningi yeMinecraft.
Ufuna Ukudlala iMinecraft ezikoleni? Uma yebo hlola I-Minecraft ivuliwe Umhlahlandlela wegeyimu.
Kungani i-Minecraft idinga i-RAM engaphezulu?
I-Minecraft ngumdlalo osebenza kahle kakhulu okulula ekucacisweni kwesistimu. Ngokungafani nemidlalo eminingi ebanzi enemifanekiso, ayidingi ama-specs ngokweqile noma okungcono kakhulu kuma-GPU ekilasi ukuze asebenze kahle. Njenge-Minecraft Vanilla, ezinye izinhlobo zidinga okungenani njenge-2GB ye-RAM ngokusemandleni ukuletha isipiliyoni sokudlala esingenamthungo.
Ngenxa yemfuneko yama-low-specs kanye nokuheha umhlaba ovulekile, ngumdlalo othandwa yiwo wonke umuntu emhlabeni jikelele. Kodwa-ke, abadlali beMinecraft bangathola ubuciko obukhulu. Ngenxa yalokho, ungahlangabezana namamephu amaningi akhiwe kakhulu ngokusetshenziswa okuningi kwamabhulokhi. Ngakho-ke, kungadinga i-RAM eningi ukusebenza kahle. Okubaluleke nakakhulu, uma udlala imodi ehlukile, kuzothatha isistimu yakho.
Kulezi zimo, kungaba yinselele enkulu ukudlala umdlalo kahle. Uzothola i-lag ne-slack ku-FPS. Ngaphandle kokulahla, i-interface ingaqala ukuphendula ngokunensa nangokuphahlazeka uma i-RAM inganeli nganoma iyiphi indlela. Ungazizwa ungenalusizo ngalezi zimo, kepha kunendlela yokuthi unikeze i-RAM eyengeziwe ku-Minecraft.
Okokuqala, ukulungiselela inqubo, qiniseka ukuthi isiqalisi osisebenzisayo sisesikhathini. Hlola izibuyekezo zemidlalo, futhi. Kungcono ukwenze ngaphambi kokuthi uqale inqubo yokuvikela noma yiluphi uhlobo lwenkinga.
Okulandelayo, qiniseka ukuthi une-RAM eyengeziwe ongayisebenzisa. Uma ungenayo i-RAM, akukho phuzu ekulandeleni le nqubo. Umthetho ojwayelekile wesithupha ukugcina ubuncane be-1 GB ye-RAM yenye inqubo yesistimu yakho. Kungathatha inani elibalulekile ohlelweni, kepha kufanelekile ukuhweba njengoba iMinecraft ingeke isebenzise i-RAM ephelele.
Ngakho-ke uma une-4 GB RAM, kufanele usebenzise i-3 GB yeMinecraft kangcono. Uma kuyi-8 GB RAM, bese kuthi i-7 GB (noma eyisithupha uma ufuna ukonga i-RAM eningi). Njengoba kushiwo ngaphambili, ukusetshenziswa kwe-RAM okujwayelekile kwe-Minecraft yi-2GB, ngakho-ke noma ngabe uyabela i-6 GB RAM, izoba ne-RAM ephindwe kathathu.
Indlela ejwayelekile yeklayenti:
Uma usebenzisa isiqalisi seMinecraft, kuzofanela wenze ikhodi ethile. Kodwa ungakhathazeki! Akuyona into ebanzi nhlobo! Cishe noma ngubani angakwenza ngokushesha. Ukuphela kokufanele ukwenze ukushintsha into eyodwa. Ngakho-ke ake sibheke ngokushesha ukuthi:
Iya ku Isiqalisi se-Minecraft , futhi uma unenguqulo noma imodi engaphezu kweyodwa, kuzofanele ukhethe leyo nguqulo ethile ofuna ukuyabela i-RAM. Ungakwenza kuzo zonke izinhlobo noma izindlela onazo.
Qiniseka ukuthi uya Kokufaka bese ukhetha inguqulo oyifunayo. Lapho, uzobona inketho yokudlala noma inketho yokusetha (amachashazi amathathu). Chofoza kusethingi, futhi ukusuka lapho, uzothola okwehliswayo ukuze ukhethe ukuhlela.
Kuzovuleka iwindi elisha, bese uskrolela phansi ukuthola izimpikiswano ze-JVM. Kulelo bhokisi, uzobona imibhalo eminingi engahleliwe nama-alfabhethi. Kufanele ugxile kulokhu '-Xmx2G-'okuyikhodi yokwabiwa kwenqama yesiqalisi sakho.
Manje u-'2 'kukhona inani le-RAM elizolisebenzisa. Ungayishintsha ngokuqondile ibe ngu-3, ​​4, 6, noma yini oyithandayo.
Qaphela futhi ungahleli okunye. Hlola kabili uma kufanele, bese uchofoza ku-Gcina.
Kwesinye isikhathi kumayelana namaphrofayli, futhi lokhu kungahle kube yiphrofayili ehlukile. Ngakho-ke ngaphambi kokuqalisa umdlalo, hlola kabili ukuqinisekisa ukuthi ukhethe isimo esifanele sokusungula nokudlala okufanayo.
Ukwenza ngokwezifiso kwe-ATLauncher:
Kulula ukusebenzisa i-ATLauncher ukwenza ngezifiso ukwabiwa kwe-RAM. Ukuphela kokufanele ukwenze ukuvula i-ATLauncher bese uya kuzilungiselelo.
Lapho uzothola iMinecraft / Java. Itholakala kumamenyu aphezulu, ngakho-ke chofoza kuyo.
Ukusuka lapho, ungathola kalula i-'Maximum Memory / RAM 'namanani aphambi kwayo.
Manje usungathayipha ngesandla noma usebenzise imicibisholo ukukhulisa noma ukunciphisa ukusetshenziswa kwe-RAM.
Qiniseka ukuthi uyonga, futhi ulungele ukuhamba.
Yilokho kuphela okudingeka ukwenze.
Landela Abanye Abaqalisi:
Cishe zonke ezinye iziqhumane ezinjengeziqalisi zeTwitch kanye nombukiso onjalo 'weMemori eyabiwe' kuzilungiselelo. Ungakwazi ukufinyelela izilungiselelo kalula. Uma ungayitholi imemori eyabiwe lapho, lapho-ke ungaya kuzilungiselelo ze-Java kuzo. Okunye ukwethulwa kungahle kube ne-‘Minecraft ’esimeni sokuthi ushintshe.
Kunoma ikuphi, inqubo iyafana. Uya kwimemori oyabelwe bese ukhulisa noma wehlise i-RAM bese ulondoloza izilungiselelo.
I-RAM yisona sinqumo esiyinhloko sokusebenza komdlalo ukuyidlala kahle. Awudingi ukukhathazeka nge-GPU noma ezinye izidingo. Uma udlala ku-inthanethi emhlabeni ovulekile, khona-ke uzodinga isivinini esikhulu sokuxhuma, futhi yilokho kuphela.
Manje usuyazi ukuthi uyabela kanjani i-RAM ephakeme ngeMinecraft. Ungakwazi ukwaba i-RAM ephelele. Akufani nokuthi iMinecraft izosebenzisa ukukhishwa kwe-RAM okuphezulu ngaso sonke isikhathi. Kodwa-ke, ngaso sonke isikhathi kungcono ukukhumbula umthetho ojwayelekile futhi ugcine i-1 GB RAM yeminye imisebenzi nezinqubo.
Khumbula, lezi zinqubo ezenzelwe imidlalo ejwayelekile yeMinecraft nama-launcher. Ngokuyinhloko, ungazisebenzisa kahle kwi-PC. Uma unamanye amadivayisi afana neplatifomu ye-Android, kungenzeka ukuthi isebenzisa isiqalisi ngasinye futhi ingalandela inqubo efanayo.
Ngakho-ke jabulela iMinecraft ngaphandle kokulahla noma ukwehla kokusebenza. Zijabulise futhi wabelane ngokuhlakanipha!
Twitch Prime Mahhala Imidlalo
Umngane Wami Ohlakaniphile Isizini 3: Izibuyekezo Odinga Ukuzazi Namuhla!